डोल्पाका सासंद बुढा राजिनामा नदिने निचोडमा, वामदेव भने अझै सांसद बन्ने आशामा-Nepali online news portal
डोल्पाका सासंद बुढा राजिनामा नदिने निचोडमा, वामदेव भने अझै सांसद बन्ने आशामा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमलाई उप चुनाव लडाएर संसद प्रवेश गराउने विषय नेकपाभित्र आजभोलि प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ ।
केही समयअघि नेता गौतमलाई डोल्पामा उपचुनाव मार्फत सांसद बनाउने विषयमा आन्तरिक संवाद सुरु भएको थियो । आफू सांसद बन्न इच्छुक रहेको कुरा नेता गौतमले यसअघि नै सचिवालयको बैठकमा व्यक्त गरेका थिए । त्यो विषयमो बैठकमा छलफल पनि भएको थियो । तर उनलाई चुनावमा उठाउने नउठाउने विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन ।
डोल्पाबाट निर्वाचित सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा दिन लगाएर नेता गौतम उपनिर्वाचनमार्फत संसदमा आउन चाहन्छन् । बुढा हाल पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री बुढासँग एक्लाएक्लै भेट गरेर बामदेवलाई चुनाव लडाउने विषयमा छलफल समेत गरिसकेका छन् । यस्तो भेटमा सांसद बुढाले आफूले पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्ने बताइसकेका छन् ।
तर नेकपाको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पछिल्लो समय बामदेवको चाहनाभन्दा पनि प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय सङ्गठनको एकीकरण सचिवालयको प्राथमिकतामा छन् ।
‘हिजो (बुधबार) सचिवालयको बैठकमा बामदेव कमरेडको विषयमा खासै छलफल भएन । आज (बिहीबार) को बैठकमा पनि उहाँको भन्दा पार्टी एकताको विषयमा छलफल बढी केन्द्रित हुन्छ । हामीले सबै तहका सङ्गठनको एकीकरण नटुङ्ग्याउँदासम्म नेताकार्यकर्तामा अन्यौलता देखियो । अहिले हामी साङ्गठनिक एकीकरणको मापदण्डबारे छलफलमा केन्द्रित छौँ । आज नै प्रदेशको नेतृत्वबारे सकभर टुङ्ग्याउने गरी छलफल गर्दै छौँ । बामदेव कमरेडको विषयमा पछिल्लो समय खासै छलफल भएको छैन । छलफल होला उहाँको विषयमा पनि तर अहिले प्राथमिकता साङ्गठनिक एकीकरण नै हो ।’ ती नेताले भने– ‘यसअघिका बैठकमा वामदेव कमरेडलाई चुनाव लडाउने विषयमा सचिवालयमा छलफल नभएको पनि होइन भएको हो । उहाँ चुनाव लड्दा जितको सुनिश्चताको विषयमा पनि छलफल भएको हो । डोल्पा नै किन ? भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उमेर, स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै डोल्पा कठिन हुन सक्छ । अलि सहरी क्षेत्रबाट चुनावमा उठ्दा सजह होला भन्ने दोस्रो विकल्पको सुझाव पनि दिएका हौँ । तर उहाँको चाहना डोल्पा नै छ । जे भए पनि अब निर्णय होला ।’
अध्यक्षद्वयले छिट्टै निर्णय गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा नेता गौतम छन् । उनी त्यसैअनुरूपको लबिङमा पनि छन् । आफू निकटका नेता कार्यकर्ताहरूसँग नेता गौतमले पार्टीले छिटै निर्णय गरिदिए चुनावको तयारी सुरु गर्ने बताउँदै आएका छन् । पार्टीले औपचारिक निर्णय गरिदिए कात्तिकमा चुनाव गर्ने गरी छलफल भएको थियो । तर शीर्ष नेताहरूले व्यस्तताको कारण देखाउँदै नेता गौतमको चाहनालाई टार्ने गरेको सचिवालयका एक नेताले बताए ।
डोल्पा भूगोलको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो जिल्ला हो । सकेसम्म कात्तिकभित्रै चुनाव भए चुनावी प्रचारमा मौसमले साथ दिने र त्यसभन्दा ढिला भए उच्च हिमाली भेगमा रहेको डोल्पामा चिसोले चुनावी कार्यक्रम प्रभावित हुने गौतम आफू निकटका नेताहरूसँग बताउँदै आएका छन् ।
‘उहाँ डोल्पाबाट चुनाव लड्ने भन्ने विषयमा सबैतिर हल्ला भइसकेको छ । सचिवालयले अहिलेसम्म डोल्पाबाट चुनाव लडाउने वा नलडाउने भन्ने विषयमा कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । उहाँको चाहना डोल्पाबाट नै चुनाव लड्ने भन्ने छ । पार्टीले निर्णय गर्न जति ढिला गर्छ, मौसमको कारण उहाँको चुनाव लड्ने सम्भावना कम हुँदै जान्छ । अहिले उहाँले तयारी पनि गरिरहनुभएको छ चुनावको । तर पार्टीले निर्णय गर्न ढिला गर्दा उहाँलाई अलि तनाव सिर्जना भएको छ ।’ नेता गौतम निकट एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।
यद्यपि नेता गौतम मौन छन् । उनी पार्टीको औपचारिक निर्णय नहुँदासम्म बोल्न चाहेनन् ।
उनको सांसद बन्ने चाहना पछाडिको कारण के ?
तत्कालीन बामगठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवारका रूपमा बर्दिया–१ बाट चुनाव लडेका गौतम काँग्रेस नेता सञ्जय गौतमसँग पराजित भएका थिए । नेकपाका सचिवालयमा गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्रै सांसद छैनन् । श्रेष्ठले गोरखा–२ मा बाबुराम भट्टराईसँग पराजित भएका थिए ।
त्यसपछि नेता गौतमले अन्तर्घातका कारण आफूले चुनाव हार्नुपरेको बताएका थिए । नेता गौतमले यस्तो बताएपछि तत्कालीन एमालेले छानविन समिति पनि बनाएको थियो । तर उक्त समितिको विस्तृत प्रतिवेदन भने बाहिर आएन ।
नेता गौतम अन्तर्घात गरेर आफूलाई हराउने नेता–कार्यकर्तालाई चुनाव जितेरै देखाउन चाहन्छन् । ‘उहाँ (बामदेव) मा चुनाव जितेरै सांसद हुने मन छ । यो अन्तर्घात गर्नेलाई जवाफ पनि हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ छ ।’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने ।
नेकपाका उच्च स्रोतहरूले बताएअनुसार गौतम प्रतिनिधिसभाकै सदस्य बन्नका लागि इच्छुक हुनुमा उनमा प्रधानमन्त्री बन्ने अपेक्षाले पनि काम गरेको छ । मन्त्री हुन राष्ट्रियसभाको सदस्य भए पनि हुन्छ तर प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधिसभाकै सदस्य हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ‘भविष्यमा प्रधानमन्त्रीको सम्भावना हुन आफू पनि दौडमा रहन सकियोस् भनेर उहाँले प्रत्यक्ष चुनाव लडेर संसदमा प्रवेश गर्ने मन बनाउनु भएको छ ।’ बामदेव निकट मानिने तत्कालीन एमालेका एक नेताले बताए ।
तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले एक पटक संसदमै तत्कालीन एमालेभित्र आफूले धेरै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएको, अब शीर्ष नेतामध्ये एक जना रहेको र उनी पनि भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका थिए । त्यसपछि एक पत्रिकालाई दिएको अन्तरवार्तामा नेता गौतमले पनि आफू भविष्यमा प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने बताएका छन् ।
बुढाले राजीनामा नदिने भन्ने हल्ला मात्रै
पर्यटन राज्यमन्त्रीसमेत रहेका सांसद बुढाले राजीनामा दिन अस्वीकार गरेको भन्ने हल्ला निराधार रहेको वामदेव निकट एक नेताले बताए । ‘उहाँ (मन्त्री बुढा) ले कतै पनि भन्नुभएको छैन राजीनामा दिन्न भनेर । मिडियामा आएको हल्ला मात्रै हो । त्यो सत्य होइन । पहिला पार्टीले औपचारिक निर्णय गर्नुपर्यो । त्यसपछि उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ । यसमा उहाँ आफैँ सहमत हुनुहुन्छ । डोल्पाबाटै चुनाव लड्ने भन्नेबारे छलफल भएको हो । अन्यत्रबाट चुनाव लड्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल कतै भएको छैन ।’ ती नेताले बताए ।
सांसद बुढा सुरुमा राजीनामा दिएर बामदेवका लागि ठाउँ खाली गर्न सकारात्मक देखिएका र उनी गौतमको पक्षमा माहोल बनाउने भन्दै जिल्ला गएर फर्केपछि मतदाताको दबाबका कारण राजीनामा नदिने निष्कर्षमा पुगेका समाचार विभिन्न मिडियामा आएका थिए ।
तत्कालीन एमाले निकट स्रोतका अनुसार बुढालाई नेता गौतमको चाहनामा राज्य मन्त्री बनाइएको हो । त्यसअघि बुढाले गौतमकै चाहनामा डोल्पाबाट चुनाव लड्ने अवसर पाएका थिए । ‘बुढाजीलाई सिट खाली गर्ने शर्तमा राज्य मन्त्री बनाइएको रहेछ । त्यसैअनुसार उहाँले पार्टी निर्णय मान्नु भन्नुभएको छ ।’ नेकपाको उच्च स्रोतले भन्यो । संसद सदस्य नरहे पनि ६ महिनासम्म मन्त्री पदमा बस्न पाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । पछिल्लो समय मिडियामा आएजस्तो हल्ला सत्य नभएको बताए ।
विरोध पनि छ
सांसद बुढालाई हटाएर नेता गौतमलाई चुनाव लडाउन थालिएको भन्दै कतिपय वृत्तमा यसको विरोध पनि सुरु भएको छ । गत साउन १८ गते डोल्पाका केही युवाहरूले आफ्ना सांसद बुढालाई पदबाट राजीनामा गराउने खेल भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी सांसद बुढाले डोल्पाली जनताको विश्वास जितेको र उनलाई पाँच वर्षसम्म काम गर्न दिन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेतृत्वको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । नेता गौमतले भने यस्तो विरोधमा पार्टीभित्रकै आफू विरोधी नेताहरूको हात रहेको आशङ्का गरेका छन् ।
सांसद बुढाले २०७४ को प्रतिनिधिसभाको चुनावमा फराकिलो मतले काँग्रेस उम्मेदवारलाई पराजित गरेका थिए । बुढाको पक्षमा ११ हजार सात ६१ मत आउँदा काँग्रेस उम्मेदवार अंगदकुमार बुढाले तीन हजार एक सय ६६ मत मात्रै पाएका थिए । बुढा २०७० को दोस्रो संविधानसभामा पनि डोल्पाबाट निर्वाचित भएका थिए । राताेपाटीले तयार पारेकाे रिपाेर्ट ।